An-kitsim-po: sakana ny tsy fisian’ny herinaratra | NewsMada
An-kitsim-po: sakana ny tsy fisian’ny herinaratra
Eo amin’ny vaovao eran-tany (etsy an-kilany), betsaka ihany ireo firenena afrikanina sahirana amin’ny famatsiana herinaratra, angovo amin’ny ankapobeny. Anisan’ny iharan’izany mafy eto Madagasikara, any amin’ny faritra maro, indrindra ny any amin’ny kaominina ambanivohitra. Misy ihany ny vahaolana efa noraisina, ataon’ny fitondrana teo aloha sy ankehitriny, saingy mbola tsy mahavaha olana izany amin’ny ankapobeny. 15 % ihany, raha be indrindra, ny tambajotra misy herinaratra manerana ny Nosy.
Io no sakana lehibe amin’ny fampandrosoana eto amin’ny Nosy. Singa iray zahan’ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha, avy eto an-toerana sy any ivelany, ka sakana ho azy ireo tsy hanitatra ny fihariana any amin’ny faritra, indrindra ny any amin’ireo kaominina ambanivohitra. Amin’izao taonjato izao, sarotra ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana raha tsy misy ny famatsiana herinaratra ho an’ny sehatra rehetra : ny asa fihariana ; ny sosialy, toy ny fitsaboana sy ny fampianarana. Raha ny fampianarana, ohatra, vitsy ny ahitana famatsiana herinaratra any amin’ireo sekolim-panjakana na amin’ny tanàn-dehibe aza. Sakana iray tsy afahan’ny ankizy manitatra ny fahalalana izany.
Sokajina anisan’ny laharam-pahamehana ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara, saingy betsaka ny sakana any amin’ny faritra isanisany. Sarotra antenaina ny Jirama raha ny zava-misy ankehitriny, raha ny fanazavan’ny teknisianina maromaro ao aminy ihany.